I-Honey Hive! I-ADU ethandekayo eduze ne-Durango Hot Springs - I-Airbnb
I-Honey Hive! I-ADU ethandekayo eduze ne-Durango Hot Springs
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-BeBe
U-BeBe Ungumbungazi ovelele
Ukusuka ku-Honey Hive ungakwazi ukufinyelela noma yini ngaphakathi kwesifunda kusuka e-Durango Hot Springs kuya e-Mesa Verde. Ukuqwala izintaba okuningi okuhlanganisa ukufinyelela emzileni wase-Colorado kanye nama-ers angu-14’noma amabhayisikili asezintabeni amasistimu omzila adume umhlaba wonke edolobheni noma ukugibela izwe eliphakeme. Mhlawumbe ukhetha ukugibela isitimela sase-Durango- Silverton noma i-Ski Purgatory, i-Silverton Mountain noma i-backcountry ski. Uma ukulungele ukuzijabulisa uzokuthola lapha. Konke kufinyeleleka kalula kuwe ukuba ube neholide elimnandi e-Durango.
I-Honey Hive iyindawo yesitudiyo enendlu yokugezela (ishawa), ikhishi elincane, negumbi lokuphumula. Ngaphezu kwalokho, le ndawo ihlanganisa iveranda yangasese ebheke izintaba ezinhle nendawo yamahlathi e-Hermosa. Kukhona nendawo yangaphandle yezilwane zakho ezifuywayo. Okwamanje ilungiswa ibe yindawo yangaphandle yangasese (ezayo maduzane) enamakhabethe e-hammock nombhede wangaphandle ukuze uzijabulise ngokuphumula.
4.79 · 86 okushiwo abanye
I-Hermosa ibhekwa njengebhanana lendawo. Kunama-orchard amaningi, ukubukwa kwesigodi, izilwane, ukufinyelela okusheshayo emizileni yokuqwala izintaba kanye nakho konke okunye okunikezwa yi-Durango ne-Silverton. Yimizuzu engu-15 yokuhamba ngemoto ukuya eningizimu ye-Durango, imizuzu engu-20 ukuya e-Purgatory, nemizuzu engu-45 ukuya e-Silverton. I-Durango Hot Springs ingaphakathi kwamamayela angu- 203.
Abasizi u-Tim no-Suchada bahlala endlini ehambisanayo futhi banobungane kakhulu. Bazimisele ukusiza ukwenza ukuhlala kwakho e-Honey Hive kube yinto emnandi.
UBeBe Ungumbungazi ovelele